အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: 05/01/2012 - 06/01/2012
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Tuesday, May 29, 2012 Tuesday, May 29, 2012 Labels: ရသစာစုများ
ကောင်မလေးဟာ ဆင်းရဲပြီး ရိုးသားအေးဆေးတဲ့ မိသားစုမှ မွေးဖွားလာသူတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်.. သူမတို့ရဲ့ အိမ်ကလေးဟာ တောင်ကုန်းတစ်ခုရဲ့ အပေါ်မှာရှိပြီး သိပ်မကျယ် လှတဲ့ ခြံကလေး ထဲမှာဘဲ ပြေးလွှားဆော့ကစားရင်း ကြီးပြင်းလာခဲ့ရပါတယ်.. အိမ်ကလေးရဲ့ ခြံစည်းရိုး ကနေ ကျော်ကြည့် လိုက်မယ်ဆိုရင် အခြားတောင်ကုန်းလေး တစ်ခုကို လှမ်းမြင်နိုင်ပါတယ်.. အဲဒီတောင်ကုန်းလေးပေါ်မှာ တည်ရှိနေတဲ့ အိမ်တစ်အိမ်ကတော့ ကောင်မလေးရဲ့အမြင်မှာ အင်မတန်မှ လှပခမ်းနားပြီး ရွှေရောင် ၀င်းလက် တောက်ပနေတဲ့ ပြူတင်းပေါက်လေးတွေ ရှိနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီအိမ် ပြူတင်းပေါက်လေးရဲ့ ရွှေရောင် တောက်ပနေမှုက ကောင်မလေးရဲ့ စိတ်အစဉ်ကို အမြဲ ဖမ်းစားထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကောင်မလေးတို့ရဲ့ ရိုးရှင်းလှတဲ့ ဒီအိမ်ကလေးနဲ့စာရင် ဟိုဘက် တောင်ကုန်းပေါ်က အိမ်မျိုးမှာ နေထိုင် ကြီးပြင်းခွင့်သာ ရခဲ့မယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက် များ ပျော်ရွှင် ကြည်နူးဖွယ်၊ စိတ်လှုပ်ရှား တက်ကြွဖွယ် ကောင်းလိုက်မှာပါလဲ လို့ အမြဲတမ်း တွေးနေ မိပါတယ်။
ကောင်မလေးဟာ သူ့မိခင်ဖခင်နဲ့ သူ့မိသားစုကို ချစ်ခင်တွယ်တာပေမဲ့ ဟိုဘက် တောင်ကုန်းပေါ်က အိမ်ကလေးကိုသာ တမ်းတလို့သာ နေရှာပါတယ်… အဲဒီအိမ်ကလေးဟာ သူမအမြဲမက်နေတဲ့ အိပ်မက်လေး တစ်ခုလည်း ဖြစ်လာပါတယ်.. ထိုတောင်ကုန်းပေါ်က ရွှေရောင် ပြူတင်းလေးတွေနဲ့ အိမ်ကလေးဟာ စိတ်ဝင်စားစရာ၊ စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေပြီး နေရထိုင်ရတာ သက်တောင့် သက်သာရှိလိမ့်မယ်၊ နေပျော်ချင်စဖွယ် ရှိနေလိမ့်မယ် လို့လည်း သူမက ယုံကြည်နေပြန် ပါတယ်။ ကောင်မလေး ဟာ အချိန်အားရရင် ခြံစည်းရိုးကလေးကနေ တစ်ဘက်တောင်ကုန်းက အိမ်ကလေးကို မျှော်ငေးရင်း အချိန်ကုန်နေတတ်ခဲ့ပါတယ်..
သူမဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထိန်းသိမ်းလာနိုင်တဲ့အရွယ်၊ စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်တဲ့အရွယ် ရောက်လာတဲ့ အချိန်မှာတော့ သူမတို့ ခြံစည်းရိုးကလေးကနေ အပြင်လောကကို ထွက်ပြီး လေ့လာကြည့်လိုတဲ့ ဆန္ဒတွေ ဖြစ်လာပါပြီ…. သူမအိမ်က စက်ဘီး အဟောင်း ကလေးနဲ့အတူ သူမတို့အိမ်ရဲ့ ခြံစည်းရိုး အပြင်ဘက် တောင်အောက်က လမ်းကလေးပေါ် စက်ဘီးစီးခွင့်ပြုဖို့ မိခင်ကို အကြိမ်ကြိမ် အခါခါ တောင်းပန်ပါတယ်.. နောက်ဆုံးတော့ သူမရဲ့ မိခင်ဖြစ်သူက ကောင်မလေးရဲ့ ဆန္ဒကို လိုက်လျော ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်.. အိမ်ကလေးကနေ လွတ်လပ် ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ တောင်ကြားလမ်းလေး တစ်လျှောက် စက်ဘီးလေး စီးလို့ ထွက်လာတဲ့ ကောင်မလေးဟာ သူမ သွား နေတဲ့ ဦးတည်ရာကို သေချာ သိနေပါတယ်.. သူမ အသွားချင်ဆုံး၊ အကြည့်ချင်ဆုံး၊ ရင်အခုန်ဆုံး နေရာလေးဖြစ်တဲ့ တစ်ဘက် တောင်ကုန်းပေါ်က အိမ်ကလေးဘဲပေါ့… ကောင်မလေးဟာ သူမ တွယ်ငြိနေတဲ့ တောင်ကုန်း ထိပ်က အိမ်ကလေးရဲ့ အနီးဆုံးနေရာကို စက်ဘီးကလေးနဲ့ မမောမပန်းနိုင် ရောက်အောင် တက်သွားနေပါတယ်။
ကုန်းထိပ်လေးရောက်တော့ အိမ်ကလေးရဲ့ ခြံဝင်းတံခါးပေါက်နဲ့ အနီးဆုံးနေရာမှာ စက်ဘီးကို ရပ်လိုက်ပါတယ်.… ပြီးတော့ ခြံဝင်း ထိပ်ကနေပြီး အိမ်ကလေးဆီကို ဦးတည်သွားနေတဲ့ လမ်းကလေး၊ ခြံဝင်းတစ်ခုလုံး၊ နောက်ဆုံး အိမ်ကြီးတစ်ခုလုံးကို အသေးစိတ် စေ့စေ့စပ်စပ် လေ့လာ ကြည့်ရှုပါတော့တယ်.. ပြီးတော့ သူမ အစွဲလန်းခဲ့ဆုံး ပြူတင်းပေါက်ကလေးများပေါ့.. ဒီမှာတင်ဘဲ သူမရဲ့ ဒီအိမ်ကလေးအပေါ်ထားတဲ့ ငြိတွယ်မှုတွေ အားလုံး နိဂုံး ချုပ်သွားစေမဲ့ အရာက ရွှေရောင်တောက် ပနေပြီး သိပ်ကို ထူးခြား ဆန်းပြားစွာ လှပ လွန်းပါတယ်လို့ ကောင်မလေး ထင်ခဲ့ဘူးတဲ့ ပြူတင်းပေါက်လေး။ အခု လက်တွေ့ တကယ်တမ်း သူမ တွေ့နေရတာက ဘာ အရောင်အဆင်းမှ မရှိဘဲ မှေးမှိန်ဖျော့တော့လို့နေတဲ့ ခပ်ညစ်ညစ် ပြူတင်းပေါက်လေးများသာ။ အဝေးကနေ လှပထယ်ဝါ တင့်တယ်ခမ်းနားပါတယ်လို့ ထင်ခဲ့တဲ့ အိမ်ကလေးဟာလည်း လူမနေတော့ဘဲ စွန့်ပစ်ထားခဲ့တာ ကြာပြီဖြစ်ပုံရတဲ့ ဘာမှထူးခြားမှုမရှိတဲ့ ခပ်ဟောင်းဟောင်း အိမ်ကလေး တစ်လုံးမျှသာ… ရွှေရောင်ပြူတင်းပေါက်လေး ဆိုတာဟာလည်း နေရောင်ခြည် ဖြာဝေ လင်းပတဲ့ အချိန်မှာ ရွှေရောင်တောက်ပနေတယ်လို့ အဝေးကနေမြင်ခဲ့ရတဲ့ ကောင်မလေးရဲ့ အထင် သက်သက်မျှသာ…
တကယ်မရှိတဲ့ ရွှေရောင် ပြူတင်းပေါက် ကလေးအတွက် ကြေကွဲဆုံးရှုံးမှုကို ခံစားလိုက်ရတဲ့ ကောင်မလေးဟာ တကယ်တမ်းတော့ သူမရဲ့ ကာလရှည်ကြာ မက်ခဲ့ရတဲ့ အိပ်မက်ကလေး တစ်ခုကို လက်လွတ်လိုက်ရခြင်းလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ စွဲလမ်းမှုလေးအတွက် နှမြောတသစိတ် ၀မ်းနည်းကြေကွဲစိတ်တွေနဲ့ ကောင်မလေးဟာ သူ့ရဲ့စက်ဘီးလေးကို ပြန်စီးနင်းလိုက်ပြီး ထိုအိမ်ရှိရာ တောင်ကုန်းလေးထိပ်ကနေ ထွက်ခွာ လာပါတော့တယ်.. စက်ဘီးလေးကို အားစိုက်နင်းနေရင်းက အတော်ကြာတော့ သူမရဲ့ခေါင်းလေးကို အသာမော့လို့ ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ သူမတွေ့လိုက်ရတာက နေရောင်ခြည်လေးေ တွဟာ သူမတို့ရဲ့ အိမ်ကလေးပေါ်ကို ရွှန်းလဲ့ဖြာကျလို့ ၀င်းဝင်း ၀ါဝါကလေး.... ပြူတင်းပေါက်လေးတွေ ဟာလည်း ရွှေရောင်တောက်ပလို့.. “အိုး…… လှလိုက်တဲ့ ပြူတင်းပေါက်လေး..” တောင်ကြားလမ်းကလေး တစ်လျှောက်က အိမ်ကလေးတွေရဲ့ အပေါ်မှာလည်း နေခြည်လဲ့လဲ့က ၀ါရွှေလင်းမြလို့။ ပြူတင်းပေါက်တွေ မှာလည်း ရွှေရောင်ဖွဖွ ရွှန်းပလို့…… လှလိုက်ပါဘိ.။
ကောင်မလေး သဘောပေါက်ပါပြီ.. တကယ်တမ်းတော့ သူမဟာ ရွှေရောင်ပြူတင်းပေါက်လေးတွေ ရှိတဲ့အိမ်မှာ နေထိုင်ခွင့် ရနေခဲ့တာ သူမကိုယ်တိုင် ဘယ်တုန်းကမှ မသိခဲ့ပါဘူး… ခုလို မြင်သာတဲ့နေရာ ရောက်တဲ့ အခါမှသာ ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အရာရဲ့ တန်ဖိုးနဲ့ အလှအပကို ကောင်းကောင်း မြင်တွေ့နိုင်ခွင့် ရလိုက်တာပါ… သူမရဲ့ အိမ်ကလေးဟာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေ၊ နွေးထွေးလုံခြုံခြင်းတွေ အပြည့်နဲ့ အလွန်လှပတဲ့ ရွှေရောင် ပြူတင်းပေါက် ကလေးတွေနဲ့ အိမ်ကလေးတစ်လုံးသာ ဖြစ်ပါတယ်… ဒီနေရာမှာ သူမကို ချစ်ခင်တဲ့ မိသားစုလည်း ရှိနေတယ်လေ.…. အိမ်အပြန်လမ်းမှာတော့ ကောင်မလေးဟာ ကြည်လင်ရွှင်ပြခြင်း ရွှင်လန်း ဝမ်းမြောက်ခြင်း အပြည့်နဲ့ စက်ဘီးကလေးကို ခပ်သွက်သွက်လေး စီးနင်းရင်းပေါ့။ သူမဦးတည်ရာ အရပ်ဟာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ မိသားစုဝင်တွေရဲ့ နွေးထွေးလုံခြုံခြင်းတွေ ရှိနေမဲ့ ရွှေရောင် ပြူတင်း နဲ့ ရွှေရောင် လင်းလက်နေတဲ့ ချစ်ဖွယ်ရာ သူမရဲ့ အိမ်ကလေး တစ်လုံးသာ ဖြစ်တယ် မဟုတ်ပါလား။
တစ်ခါတစ်လေမှာတော့ ကျွန်မတို့ဟာ ကိုယ်နေတဲ့ အိမ်ကလေးကိုကျော်ပြီး တစ်ဘက်က အိမ်ကလေးကို ကိုယ့်အိမ်ထက်ပိုပြီး ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းတယ်၊ သာယာလှပတယ်လို့ ထင်တတ်ကြပါတယ်.. တကယ်တမ်း မှာတော့ ကိုယ်နေထိုင်ရာ ကိုယ့်မိသားစုရှိတဲ့ အိမ်ကလေး ကသာလျှင် မိမိကို နွေးထွေးတဲ့ မေတ္တာတရားတွေပေးမဲ့ ရွှေရောင် ရိပ်မြုံလေးသာ ဖြစ်တယ် မဟုတ်ပါလားနော်။ အိမ်နဲ့ဝေးနေသူများအားလုံး နွေးထွေးတဲ့ အိမ်ရိပ်ကို အမြန်ဆုံး ပြန်လည် ခိုလှုံနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုမွန်ခြွေလျှက် The House with The Golden Windows (Author Unknown) ကို ဘာသာပြန် ခံစားရေးဖွဲ့ပါသည်။
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Saturday, May 26, 2012 Saturday, May 26, 2012 Labels: သုတအဖြာဖြာ
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကြီးဆုံးအဖြစ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ မြ ဟာ သွေးပြီးတဲ့ အနေအထားမှာ ၅၇၅ဝဝ ကာရက် ရှိပြီး “နတ်ဘုရားရဲ့ လှပတဲ့ လက်ဆောင်” လို့ အမည်ရတဲ့ "သီအိုဒိုရာ" လို့ အမည်ပေးထားပါတယ်။ ဇန်နဝါရီ ၂၈ရက်နေ့က ကနေဒါနိုင်ငံ ဘရစ်တစ် ကိုလံဘီယာမှာ ကျင်းပတဲ့ Western Star လေလံပွဲမှာ ကြမ်းခမ်းဈေး ဒေါ်လာတစ်သန်းဖြင့် ခင်းကျင်းထားသော်လည်း လေလံပွဲ ကျင်းပသူများနဲ့ ဒီအိုဒိုကို မြင်ဖူးကြသူများက ကြမ်းခင်းဈေးထက် အဆပေါင်းများစွာ ဈေးရလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။ သာမာန် ကျောက်မျက်ရတနာကို လေလံတင် ရောင်းချတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး မြကြီးကို ပိုင်ရှင်ဖြစ်လိုသူက ဂုဏ်သိက္ခာတစ်ရပ်အဖြစ် တန်ဖိုးထား ပေးဝယ်တာမျိုးဖြစ်တဲ့ လေလံပွဲ လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ပိုင်ရှင် Regan Reaney နဲ့ အတူ တွေ့ရတဲ့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး မြကြီး
ခုလက်ရှိ ပိုင်ရှင်ကတော့ Regan Reaney ဖြစ်ပြီး အချို့ကတော့ ၄င်း မြကြီးကို အရောင်သွင်း ပြုပြင်ထားတယ်လို့ ပြောကြတဲ့အတွက် ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ Regan Reaney ကတော့ သူ့ကျောက်ကို မည်သူမဆို စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်လို့ အာမခံထားပါတယ်။ ဖရဲသီးတစ်လုံး အရွယ်ခန့် ရှိတဲ့ ၄င်း မြကို ဘရာဇီးနိုင်ငံကနေ တူးဖော်ရရှိခဲ့ပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ သွေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ၁၁.၅ပေါင် အလေးချိန် ရှိတဲ့ ၄င်းမြဟာ အရိုင်းတုံးအဖြစ် ထွက်ရှိပြီးသမျှ မြ တွေထဲမှာ နံပါတ်-၅ အကြီးဆုံးဖြစ်ပေ မဲ့ ဖြတ်တောက်ပြီး သွေးလိုက်တဲ့ အချိန်မှာတော့ ယခုတွေ့မြင်ရတဲ့ Teodora ကသာ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ဖြစ်လာပါတယ်။ Regan Reaney က ၄င်းမြကြီးကို အိန္ဒိယနိုင်ငံက သူဌေးကြီးတစ်ဦးဆီက တဆင့်ပြန်လည်ဝယ်ယူတာဖြစ်ပြီး ၄င်းနာမည်ကို ဖော်ပြဖို့တော့ ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
မြအကြောင်း ဗဟုသုတအနည်းငယ် ဖြည့်စွက် ပြောရမယ်ဆိုရင် ၄င်းကျောက်မျက်ရတနာကို ကိုလံဘီယာ၊ အာဖဂန်နစ်စတန်၊ ဇင်ဘာဘွေ၊ ဘရာဇီးနဲ့ ကနေဒါတို့မှာ တူးဖော် ရရှိနိုင်ပါတယ်။ မာခြင်းအဆင့် ၇.၅ မှ ၈ ရှိပြီး (ငွေရတု-၂၅၊ ရွှေရတု-၅၀၊ စိန်ရတု-၇၅ စသဖြင့် ရှိကြရာမှာ) ၅၅-ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အထိမ်းအမှတ် ကျောက်မျက်ရတနာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မြဟာ ချစ်စဖွယ်ကောင်းသော အစိမ်းရောင်နှင့် အလင်းဖောက်နိုင်သော ကြည်လင်မှုမျိုး ရှိသည့် ကျောက်ဖြစ်ပြီး ၄င်းသည် အပူဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိကာ အလွယ်တကူ အရောင်မပြောင်းနိုင်သော အစွမ်းသတ္တိ ရှိပါတယ်။ မြသည် အနာအဆာများ ပါဝင်မှုနှုန်း များသောကြောင့် အက်ကြောင်းများ၊ အမြုပ်များ ပါရှိပြီး ကျိုးပဲ့လွယ်သော ကျောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ လုံးဝ အပြစ်အနာကင်းတဲ့ မြကို တွေ့ဖို့ ခဲယဉ်းတယ်လို့လည်း ဆိုကြပါတယ်။ မြကို အများအားဖြင့် ပုံစံတစ်မျိုးတည်းသာ သွေးကြသောကြောင့် ၄င်းသွေးနည်းကို မြကွက်ဟူ၍ပင် ခေါ်ဆိုကြပါတယ်။
ကျောက်မျက်ရတနာကို စံနှုန်းသတ်မှတ်ရာမှာ အနာအဆာကင်းစင်မှု၊ အရည်အသွေးကောင်းမွန်မှုတို့နဲ့ သတ်မှတ်ကြပြီး မြ ဆိုတဲ့ကျောက်ဟာ အနာအဆာများတဲ့ ကျောက်ဖြစ်တာမို့ ယခု မြ ဟာလည်း ကြိုးပတ်ထားသကဲ့သို့ အနာများ ပါရှိပေမဲ့ အရွယ်အစားကြီးမားတဲ့ အနေအထားမျိုး ထွက်ရှိဖို့ ခဲယဉ်းတာကြောင့်လည်း တန်ဖိုးကြီးမားပါတယ်။ မေလဖွားတို့အတွက် အဆောင်ကျောက် ဖြစ် တဲ့ မြကျောက်ဟာ အေးချမ်းတဲ့ ခံစားမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။
မြကျောက်ကို ဝတ်ဆင်ထားမယ် ဆိုရင် အကျိုးပေးတတ်ပုံများကတော့
၁. ကံကောင်းစေခြင်း၊ အောင်မြင်စေခြင်း၊ အေးချမ်းစေခြင်း
၂. ဆက်ဆံရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်စေခြင်း၊ စကားအရာတွင် အောင်မြင်စေခြင်း
၃. စွမ်းအားကို တိုးမြင့်စေခြင်း
၄. အမြင်အာရုံကို ကောင်းမွန်စေခြင်း
၅. အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးများ ဝတ်ဆင်ပါက မကောင်းသော အကြံအစည်များ မဝင်ရောက်စေခြင်း၊ အန္တရာယ် တစ်ခုခု ကြုံတွေ့ခါနီးတွင် သတိပေးတတ်ခြင်း (ကျောက် အရောင်ပြောင်း သွားခြင်း၊ ဖျော့သွားခြင်း) စသည့် အစွမ်းသတ္တိများ၊ အကျိုးထူးများ ပေးတတ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
မြကျောက်ဟာ ဝတ်ဆင်သူကို ကောင်းကျိုးတွေပေးတတ်တဲ့အတွက် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးမြကြီးကိုဝယ်ပြီး လည်ပင်းမှာ ချိတ်ထားလိုက်ရရင် ကောင်းမလား စဉ်းစားမိပြီး ဒီနေ့ကစလို့ တစ်ရက်ကို တစ်ကျပ် ပိုက်ဆံစုပါတော့မယ်ရှင် :P :P
အားလုံးဘဲ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ငြိမ်းချမ်းကြပါစေနော်။
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Tuesday, May 22, 2012 Tuesday, May 22, 2012 Labels: အက်ဆေး
သူမ ရောက်နေသော မြို့ကလေးတွင် အလွန်လှပ သာယာသော လမ်းကလေးတစ်ခု ရှိလေသည်။ ထိုလမ်းကလေးသည် မြစ်ကမ်းဘေးတွင် ရှိပြီး တာရိုးသဖွယ် မြစ်ရေကို တားသော အရံအတား အဖြစ် ပြုလုပ်ထားသည့် ဖို့မြေပေါ် ဖောက်လုပ်ထားသောလမ်း ဖြစ်လေသည်။ မြို့ကလေးသို့ သူမ ရောက်စ အချိန်က လမ်းကလေးသည် ပြုပြင်ကာစဖြစ်သည်။ ကတ္တရာပင် မခင်းရသေးသော ဖုန်ထူထူ လမ်းကလေး ဖြစ်နေခဲ့သည်။ သို့သော် မကြာမီတွင် ထိုလမ်းကလေးအား သပ်ရပ်ကောင်းမွန်သော လမ်းကလေးအဖြစ် ပြင်ဆင် လိုက်ကြသည်။ ညက်ညောလှသော ကွန်ကရစ် လမ်းကလေး ဖြစ်လာ သည်။ ပြီးလျှင် မြစ်ကမ်းတောက်လျှောက် တံတိုင်းကာလိုက်ပြီး တံတိုင်းဘေးတွင် ထိုင်စရာ ခုံကလေးများ ပြုလုပ် ထားပေးပြီး လမ်းတစ်ဖက် တစ်ချက်စီတွင် စက္ကူပန်းပင်များနှင့် အခြားသော အလှ ပန်းပင်များကို စိုက်ပျိုးလာသည်။
အပင်လတ် တစ်ချို့ကိုတော့ အမြစ်ပါ တူးယူလာပြီး လမ်းမဘေး နှစ်ဖက်တွက် စီစီရီရီ စိုက်ပျိုး လာသည့်အခါ ညနေတိုင်း မြစ်ကမ်းလေးရှိ ထိုလမ်းကလေးဆီသို့ လမ်းလျှောက်လေ့ရှိသော သူမသည် အစတွင် ဘာအပင်မှန်း မသိခဲ့ပါ။ အရွက်နှင့် အကိုင်းလုံးဝမပါဘဲ ထိုးထိုးထောင်ထောင် ပင်စည် ရှည်မျောမျောဖြင့်သာ အတိပြီးသော ထိုအပင်များကို ရုပ်ဆိုးသည်ဟုလည်း သူမက ထင်ခဲ့သေးသည်။ အပင်များကို မိုးဦးကျတွင် လာရောက် စိုက်ပျိုးထားသည်ဖြစ်၍ မိုးဖြိုင်ဖြိုင် ကျလာသောအချိန်တွင်တော့ အမြစ်ပါ ပါသည့် ထိုပင်စည်တို့မှာ ဖက်ဖူးစိမ်းရောင် ရွက်နုတို့ ဟိုတစ်စ ဒီတစ်စ ပေါ်လာလေတော့သည်။ အကိုင်းဟူ၍ လုံးဝမရှိသော ပင်စည်တွင်ကပ်လျှက် ထွက်နေသော အရွက်နု စိမ်းစိမ်းတို့ကို ကြည့်ရသည်မှာ ကင်ပွန်းရွက်နှင့်ပင် တူသလိုလို ထင်ခဲ့သော်လည်း ဘာပင်မှန်းတော့ဖြင့် အတိအကျ မသိခဲ့သလို စိတ်လည်း သိပ်မဝင်စားခဲ့ပါ။
ထိုအပင်များသည် စိုက်ပြီး ၂နှစ်အကြာတွင် အကိုင်းအခက် အလက်များ ဝေဆာလာပြီး စိမ်းစိမ်းစိုစို အပင် ခပ်အုပ်အုပ်ကလေးများ ဖြစ်လာလေသည်။ သူမစိတ်ထဲတွင် ထိုအပင်များမှာ အပွင့်မပွင့်သော တစ်နှစ်လုံး စိမ်းရင့်နေသော အရွက်စိမ်းစိမ်း အပင်မျိုးသာဖြစ်မည်ဟု ထင်မိခဲ့လေသည်။ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်ပြီး လှကလာသော လမ်းကလေးကို သံယောဇဉ်တွယ်ငြိဆဲမှာပင် ထိုမြို့ကလေးဆီမှ အခြားသော မြို့ တစ်မြို့သို့ သူမ ပြောင်းရွေ့သွား ခဲ့ရလေသည်။ ထိုသို့ ပြောင်းသွားခဲ့ပြီး နောက် နှစ်နှစ်ခန့် အကြာ တစ်ခုသော နွေနှောင်းချိန်ခါတွင် ထိုမြို့ကလေးဆီသို့ အလည်အဖြစ် ပြန်ရောက်လာခဲ့ရသည့်အခါ ညနေတိုင်း လမ်းလျှောက်ဖြစ်ခဲ့သည့် တာရိုးလမ်းကလေးဆီသို့ ထွက်လာခဲ့မိသည်။
ထိုစဉ်မှာဘဲ မယုံကြည်နိုင်စရာ မြင်ကွင်းက သူမကို ဆီးကြိုလို့ နေခဲ့သည်။ သူမရှိစဉ်က အရွက်စိမ်းစိမ်း တို့သာ မင်းမူခဲ့သော လမ်းဘေး တစ်ဖက်တစ်ချက်က အပင်တို့မှာ ရဲရဲနီသော အပွင့်များဖြင့် အနီရောင်ခြယ်ထားသည့် ဆေးရေးပန်းချီကားတစ်ချပ်ပမာ လှပနေခဲ့သည်။ လမ်းတစ်လျှောက်လုံးရှိ အပင်တိုင်းမှာ ပွင့်ချင်တိုင်း ပွင့်ခွင့်ရသဖြင့် ပွင့်လွှာပွင့်ဖတ် ပွင့်ချပ်တို့မှာ အစွမ်းကုန်အောင်ပင် ပတ္တမြားသွေး လိမ်းခြယ် လို့နေတော့သည်။ လှလိုက်သည့်ဖြစ်ခြင်း။ သည်တော့မှ သူမ သိလိုက်သည်က ထိုအပင်များသည် အပွင့်နီနီတို့ ရဲရဲရင့်ရင့် ဖူးပွင့်တတ်သော စိန်ပန်းပင်များ ဖြစ်လေသည်။ စိတ်ကူး ကောင်းလိုက်ပါဘိ။ ပင်လုံးကျွတ် ပွင့်တတ်သည့် စိန်ပန်းပင်များကို ဒီလိုလှပသည့် မြစ်ကမ်းဘေးက လမ်းကလေးမှာ လာရောက် စိုက်ပျိုးဖို့ စိတ်ကူးရသည့် သူများကို မချီးကျုးဘဲ မနေနိုင်အောင် မြင်သူတိုင်းက ကြည်နူး မိရလောက်သည့် ထိုလမ်းကလေးမှာ စိန်ပန်းနီနီတို့ဖြင့် အစွမ်းကုန်လှပလို့ နေလေတော့သည်။
စိန်ပန်းနီနီများ လမ်းဘေးဝဲယာ ပွင့်ဝေနေသော ဒီလမ်းကလေးကို သူမက အနီရောင်လမ်းကလေးဟု နာမည်ပေးလိုက်သည်။ ထိုလမ်းကလေးမှာ နာမည်နဲ့ လိုက်ဖက်အောင်ဘဲ ရဲရဲနီသော ပွင့်လွှာပွင့်ချပ်တို့ဖြင့် လမ်းနှစ်ဖက်လုံးကို အလှဆင်ထားလေသော စိန်ပန်းပွင့် နီလွင်လွင်တို့ကြောင့် အင်မတန် ချစ်စရာကောင်းပြီး သက်ဝင် လှပလွန်းလှသည်။ စိတ်ထဲမှ တိတ်တိတ်လေး သူမပေးထားသည့် အနီရောင်လမ်းကလေး ဆိုသည့် အမည်နှင့်လည်း ထိုလမ်းကလေးမှာ လိုက်ဖက်လွန်း လှသည်ဟု သူမက ထင်မိလေသည်။ ပင်လုံးကျွတ်နီးပါး ပွင့်ဝေနေသော ထို စိန်ပန်းပွင့်များသည် ရဲရဲနီသော အဆင်းဖြင့် စိမ်းမြမြ သစ်ရွက်တို့ကြားမှာ ပွင့်ဝေနေကြသည်မှာ မြကဗ္ဗလာပြင်ထက်က ပတ္တမြားကျောက်မျက်တို့ စီခြယ်ထားသည့်နှယ် စိမ်းမြမြ အရောင်နှင့် ရဲရဲနီနေသော အရောင်တို့က ထိုလမ်းကလေးကို လှရေးကြွယ်နေစေတော့သည်။
မြစ်ပြင်မှ ဖြတ်တိုက်လာသော လေပြေလေညင်းတို့ကြောင့် ပင်ပေါ်ထက်ဆီမှ ပွင့်ချပ်လွာနီနီတို့က တစ်ဖြုတ်ဖြုတ် လွင့်ဝဲ ကြွေကျလာပုံမှာ ဆန်းကြယ်လှပ တိမ်းမူးလောက်ဖွယ် ကဗျာ ဆန်လွန်း လှတော့သည်။ လမ်းမထက်တွင်လည်း ကြွေလွင့်နေသော ပွင့်ဖတ်နီရဲရဲတို့က အနီရောင် ကဗ္ဗလာ ခင်းထားသည့်နှယ် လမ်းမကြီးကို အလှဆင်လို့နေသည်။ ပွင့်ဝေနေသော စိန်ပန်းပင်ကြီး ကို မော့ကြည့် လိုက်ပါလျှင် မိုးကောင်းကင်ပြာပြာ နောက်ခံနှင့် ရဲရဲနီသော အပွင့်တို့မှာလည်း လိုက်ဖက် တင့်မောဖွယ် ကောင်းလှပေသည်။ အချို့သော အပင်တို့မှာ အဖူးတွေငုံကာစ ရှိသေးသဖြင့် အပွင့်နှင့် ရောနေသော စိမ်းစိမ်းစိုစို ချစ်စဖွယ် အဖူးအငုံလေးများ မှာလည်း အလှကျက်သရေ တစ်မျိုးပင် ဖြစ်လေသည်။
စိန်ပန်းပင်တို့အောက်ရှိ ကွန်ကရစ်ထိုင်ခုံများပေါ်တွင် ချစ်သူသမီးရည်းစား အတွဲများ၊ မိသားစုများ၊ လူငယ်လူရွယ်များ ပျော်ပျော်ပါးပါး စကားဝိုင်းဖွဲ့သူလည်းရှိ၊ လေညင်းခံသူလည်းရှိ၊ အေးအေးလူလူ စာဖတ်နေသူ၊ သီချင်းနားထောင်နေသူများလည်း ရှိလေသည်။ မျက်စိတစ်ဆုံး အနီရောင်လွှမ်းနေသော လမ်းမထက် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား လမ်းလျှောက်ကစားနေသူများ၊ စကိတ်စီးနေသူ၊ ဆိုင်ကယ်မောင်းနေသူ၊ ကားမောင်းနေသူများလည်း မရှားလှပေ။ ပွင့်ဝေနေသော စိန်ပန်းပင်ကြီးနောက်ခံဖြင့် အိုင်တင် အမျိုးမျိုးပေးပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်နေသူများလည်း ပေါများလှပါသည်။
ခါးလောက်သာရှိသည့် မမြင့်လှသော တံတိုင်းပေါ်ထိုင်ပြီး လှမ်းမျှော်ကြည့်လျှင် မှိုင်းညို့ပြာ လွင်နေသော တောင်တန်းပြာပြာတို့ကို မည်သည့် နေရာကို ကြည့်ကြည့် မြင်ရမည်သာ ဖြစ်သောကြောင့် ထိုမြို့ကလေးသည် တောင်တွေက တံတိုင်းလို ဝိုင်းရံနေသောမြို့ဟုလည်း ဆိုနိုင်ပါသည်။ နွေနှောင်း ရာသီ ဖြစ်သောကြောင့် မြစ်ထဲရှိ ရေအနက်မှာ လည်း ပေါင်လည် သာသာ၊ အချို့နေရာတွင် ဒူးသာသာလောက်သာ ရှိတော့သဖြင့် ကမ်းစပ် တစ်လျှောက်တွင် သဲသောင်ပြန့်ပြန့် ပေါ်ထွန်းနေပြီး မြစ်ရေ မှာလည်း စိမ်းမြ ကြည်လင်စွာဖြင့် စီးဆင်းနေသောကြောင့် မြစ်ထဲ ရေဆင်းချိုးကြ သူများ၊ ဆော့ကစားနေ ကြသူများ၊ ကမ်းစပ်သောင်ပြင်တွင် လမ်းလျှောက်နေသူများ၊ ငါးမျှားနေသူများ စသဖြင့် အနားယူ အပန်းဖြေစရာနေရာ တစ်ခု လည်း ဖြစ်နေလေတော့သည်။ တာရိုးဘေးတစ်ဖက်တွင် အစားအသောက် မျိုးစုံ ရောင်းချသည့် ဈေးဆိုင် တန်းများ အချို့လည်း ရှိသောကြောင့် မြစ်ပြင် ရှုခင်းကို ငေးမော ရင်းလည်း စားသောက်နိုင်သေးသည်။
သာယာလှသော ထိုလမ်းကလေးတစ်ဝိုက်သည် အေးချမ်းသာယာမှုတို့လွှမ်းခြုံနေသော လမ်းကလေးဟု သူမ စိတ်ထဲ သတ်မှတ်ထားမိလေသည်။ သို့သော် အရာရာ အေးချမ်းသာယာ လှပနေသော ထိုလမ်းကလေးတွင် အလှအပကို ဖျက်ဆီးနေသည်ဟု သူမ ထင်မိလေသော အချက်မှာ လူငယ်လေးငါးဦးခန့်သည် စိန်ပန်းပင်တို့၏ အကိုင်းအခက်များကို တွဲခိုစီးပြီး အော်ဟစ် ဆော့ ကစား နေကြခြင်း ဖြစ်လေသည်။ စိန်ပန်းပင် ဟူသည် ကျွတ်ဆတ်သည့် သဘာဝရှိသော အပင် ဖြစ်လေသောကြောင့် ထိုလူငယ်လေးများ ခိုစီးဆော့ကစားမှုကြောင့် အချို့သော အကိုင်းအခက် များမှာ ကျိုးပဲ့ကျကာ အပင်အောက်တွင်လည်း စိန်ပန်းပွင့်ကြွေများက ရဲရဲနီနေတော့သည်။ လူငယ်လေးများ၏ ပုံသဏ္ဍာန်မှာလည်း အနည်းငယ် မူးယစ်သောက်စားထားသည့် လက္ခဏာရှိလေသည်။ ပါးစပ်မှလည်း အသံပေါင်းစုံ အော်ဟစ်နေကြကာ အပျော်ကျူးနေသည့်ဟန်က အထင်သားရှိလေသည်။
သူတို့အသွင်သဏ္ဍာန်မှာ မည်သူ့ကိုမှ ဂရုမထား။ မိမိ၏ ပျော်ရွှင်မှုအတွက် လှပသော ပတ်ဝန်းကျင်ကို အကျည်းတန်အောင် ဖျက်ဆီးနေသကဲ့သို့ ရှိလေသည်။ လမ်းကလေး ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အခြားသူများမှာလည်း ထိုမြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီး စိတ် အနှောက် အယှက် ဖြစ်နေကြဟန် ရှိလေသည်။ ထိုလူငယ်လေးကြောင့် သာယာသည့် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အရုပ်ဆိုးနေ သကဲ့သို့ ဖြစ်နေတော့သည်။ ထိုလူငယ်တို့မှာတော့ မိမိကြောင့် အခြားသူများ စိတ် အနှောက်အယှက် ဖြစ်ရသည်ကို ဂရုထားမိဟန်မတူ၊ အော်ဟစ်မြဲ၊ သစ်ပင်၊ သစ်ကိုင်းများကို တွဲခိုစီးနေကြဆဲသာ ရှိလေသည်။ သူမသည်လည်း ထိုမြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီး စိတ်မသက်မသာ ခံစားမိလေသည်။ လောကကြီးတွင် မိမိဝန်းကျင်ကို သာယာလှပအောင် ကြိုးစား လုပ်ဆောင်နေသူများ ရှိသကဲ့သို့ ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်နေကြသူများလည်း ရှိတတ်ကြသည်ကို သဘောပေါက်မိရသည်။ အရေးကြီးသည်မှာ ဖျက်ဆီးသူနှင့် အလှဆင်သူများတွင် မိမိကိုယ်တိုင်က အလှဆင်သူအုပ်စုထဲ ပါဝင်ဖို့ လိုအပ်လှပါသည်။
ဝေးဝေးက မြင်ရသည့် အနီရောင်လမ်းကလေး
လောကအလှကို ဖျက်ဆီးသူနှင့် အလှဆင်သူများတွင် အလှဆင်သူ အရေအတွက်က ပိုများလာလျှင် လောကကြီးမှာလည်း ပို၍ သာယာ လှပလာသည်မှာ သေချာလှတော့သည်။ ထိုမြို့ကလေးမှ သူမ ပြန်ခဲ့ချိန်ထိ အနီရောင် လမ်းကလေး၏ အလှအပက သူမ အာရုံထဲမှာ စွဲမြဲ ကျန်နေရစ်ခဲ့သည်။ မျက်လွှာလေးကို မှေးမှိတ်လို့ ပြန်လည် စဉ်းစားမိတိုင်းလည်း အနီရောင် ပတ္တမြားပွင့်လွှာတို့ဖြင့် နီစွေး လှပလွန်းသည့် အနီရောင်လမ်းကလေးကို တရေးရေး မြင်ယောင်မိတော့သည်။ ချစ်စရာ အနီရောင် လမ်းကလေး အမြဲတမ်း သာယာလှပနေပြီး ဖျက်ဆီးသူများ ကင်းဝေးပါစေကြောင်းဖြင့်လည်း ဆုတောင်း မိရပါသေးတော့သည်။
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Saturday, May 19, 2012 Saturday, May 19, 2012 Labels: စားသောက်ဖွယ်ရာ
ဒီတစ်ပတ်မှာ လုပ်စားဖြစ်တဲ့ အစားအသောက်တွေ ထဲက သခွားသီးထောင်း အကြောင်းကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ သခွားသီးထောင်း ဆိုလို့ သခွားသီးကို ငရုပ်ဆုံထဲထည့်ပြီး ညက်ညက်ကြေအောင် ထောင်းပစ်လိုက်တာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ အားလုံးလည်း စားဖူးကြတဲ့ သင်္ဘောသီးထောင်းနည်းအတိုင်း ထောင်းထားတဲ့ သခွားသီးထောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းဟာလည်း ယိုးဒယားအစားအစာ ရောင်းချတဲ့ဆိုင်တွေမှာ စားဖူးခဲ့တဲ့ သခွားသီးထောင်းနည်း အတိုင်း ထောင်းထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပါဝင်တဲ့ ပစ္စည်း အဆာပလာတွေကလည်း သင်္ဘောသီးထောင်းမှာ ပါဝင်တဲ့အတိုင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
သခွားသီးထောင်းဖို့အတွက် ပုံမှာမြင်ရတဲ့ သခွားသီးရှည်ရှည်သွယ်သွယ်မျိုးကို ထောင်းထားတာပါ။ တကယ်လို့ ခုလို သခွားသီးမရှိရင် ရိုးရိုးသခွားသီးကို အခွံနွာပြီး ထောင်းနိုင်ပါတယ်။ ခု သခွားသီးကတော့ အခွံပါ စားလို့ရတာကြောင့် အခွံမနွာဘဲ ပါးပါးလှီးပါတယ်။
အခွံနွာပြီး ပါးပါးလှီးထားတဲ့ သခွားသီးတွေကို ခပ်တောင့်တောင့်လေးဖြစ်အောင် ရေအေးအေးမှာ ခဏစိမ်ထားလိုက်ပါတယ်။
ထို့နောက်မှာတော့ သခွားသီးကို ထောင်းပါတော့မယ်။ သခွားသီးထောင်းဖို့အတွက် ကြက်သွန်ဖြူ ၂မွှာခန့်ကို အရင်ထောင်းပါတယ်။ အစပ်ကြိုက်ရင် ငရုပ်သီးများများ ထည့်ထောင်းနိုင်ပါတယ်။ သခွားသီး၊ ခရမ်းချဉ်သီး ခပ်ထူထူးလှီး၊ ပဲတောင့်ရှည်ပို တစ်လက်မခန့်ဖြတ်၊ ပုဇွန်ခြောက်တို့ကိုထည့်ပါတယ်။ ဆား၊ ငံပြာရည်၊ အရသာမှုန့်၊ သကြား (အချို့က ထန်းညက်)၊ မြေပဲဆန်လှော်၊ သံပုရာသီးကို အရည်ညှစ်ပြီး အခွံပါ ထည့်လိုက်ပါတယ်။ ငံပြာရည်မရှိရင် ငပိနည်းနည်းလေး ထည့်ထောင်းနိုင်ပါတယ်။ အရောင်လှဖို့အတွက် ပုလင်းနဲ့လာတဲ့ ခရမ်းချဉ်သီးဆောစ့် အနည်းငယ်ကို ထည့်ပါတယ်။
အပြည့်အစုံထည့်ပြီးပြီဆိုရင် သစ်သားကျည်ပွေ့လေးနဲ့ ဖြေးဖြေးလေး ထောင်းရုံထောင်းပါတယ်။ အရသာတွေအားလုံး ရောသွားပြီဆိုရင် ချဉ်ချဉ်ချိုချိုစပ်စပ်လေးနဲ့ သခွားသီးထောင်းရပါပြီ။
နံနံ၊ ကန်ဇွန်ရွက်တို့နဲ့ တွဲဖက်ပြီး စားဖို့ပါ
ချဉ်ချဉ်ချိုချို စပ်စပ် ကြိုက်သူများအတွက် အဆင်ပြေမဲ့ သခွားသီးထောင်းပါ။ ဒီနည်းနဲ့ ဂေါ်ရခါးသီး၊ ဆလပ်ရိုးတို့ကိုလည်း ထောင်းနိုင်ပါသေးတယ်။
တလက်စတည်းမှာ ကြက်ဥထောင်းနည်းကို ပြောပြချင်ပါသေး တယ်။ ကြက်ဥထောင်းဆိုလို့ အပေါ်က နည်းတွေနဲ့ ချဉ်ချဉ်စပ်စပ် ထောင်းတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီနည်းကတော့ ကျွန်မတို့ကချင်ပြည်နယ်မှာ ထောင်းစားလေ့ရှိတဲ့ ကြက်ဥ ငရုပ်သီးထောင်းနည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပထဦးဆုံး ကြက်ဥ ၂လုံး ၃လုံးကို ကျက်အောင် ပြုတ်လိုက်ပါတယ်။ ကျက်ရင် ရေအေးမှာစိမ်ပြီး အခွံခွာထားလိုက်ပါတယ်။
ကြက်ဥပြုတ်၊ ငရုပ်သီး၊ ကြက်သွန်ဖြူ
ထို့နောက် ကြက်ဥကို သေးသေးလေးတွေဖြစ်အောင် ဓားနဲ့ စင်းထားလိုက်ပါတယ်။
ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ ငရုပ်သီးကို အရင်ထောင်းပါတယ်။ ညက်ရင် ကြက်ဥကို ထည့်ထောင်းပြီး ဆား၊ အရသာမှုန့်တို့ကိုထည့်ပါတယ်။ ပြီးရင် ပါးပါးလှီးထားတဲ့ နံနံပင်၊ ဖက်ဖယ်ရွက်တို့ကို ထည့်လိုက်ပါတယ်။
ကြက်ဥကို ငရုပ်သီးနဲ့ ထောင်းစားတဲ့ ကြက်ဥ ငရုပ်သီးထောင်းပါ။ ဒီ ကြက်ဥ ငရုပ်သီးထောင်းကတော့ အချဉ်ရည်ဟင်းတွေနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ ဟင်းတစ်ခွက်ဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံးအတွက် ပျော်ရွှင်သော အားလပ်ရက်များဖြစ်ကြပါစေရှင်..
ကစ္ဆပနဒီနဲ့ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့ ဆုံကြလေသောအခါ...
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Wednesday, May 16, 2012 Wednesday, May 16, 2012 Labels: ခရီးသွား မှတ်တမ်း
စစ်တွေမြို့မှာ အလှဆုံး နေရာလေးတစ်ခုကို ပြောပါဆိုရင် ကစ္ဆပနဒီမြစ် (ကုလားတန်မြစ်) နဲ့ ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်တို့ ဆုံတဲ့ စစ်တွေ ပွိုင့်ဟာ အလှဆုံးနေရာ တစ်ခုလို့ ညွှန်းဆိုချင်ပါတယ်။ စစ်တွေမြို့သူ မြို့သားများနဲ့ စစ်တွေမြို့ကို ရောက်ဖူးသူများကလည်း မှန်ကန်ကြောင်း ထောက်ခံကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်နော်။ ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် မြစ်တစ်စင်း ပင်လယ်ထဲ စီးဝင်တဲ့နေရာ (ဒါမှမဟုတ် မြစ်နဲ့ ပင်လယ်တို့ ပေါင်းဆုံ ကြတဲ့နေရာ ) ဆိုကတည်းက စိတ်ဝင်စားဖို့တော့ ကောင်းနေတယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ အဲဒီလို ကစ္ဆပနဒီမြစ်ကြီး ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ ဆုံကြတဲ့အတွက် စစ်တွေမြို့ရဲ့ အလှဆုံး ဗျူးပွိုင့်ဆိုတဲ့နေရာ ဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါလားနော်။
ကစ္ဆပနဒီနဲ့ ပင်လယ်ဆုံမှတ်ဖြစ်တဲ့ ပွိုင့်ရဲ့ အနေအထားကို ပြထားတဲ့ မြေပုံပါ။
ရန်ကုန်ကနေ လေယာဉ်နဲ့ ထွက်လာရာ စစ်တွေကို မနက် ၁၁နာရီလောက်မှာ ရောက်ပြီး ထမင်း စားသောက်ကာ စစ်တွေမြို့ထဲရှိ ဘုရားများနဲ့ လည်ပတ်စရာနေရာတို့ကို လည်ပတ်ပြီး နောက်ဆုံးမှ ပွိုင့်ကို သွားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ပွိုင့်ကို ရောက်တဲ့အဲဒီအချိန်ဟာ ညနေစောင်းပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်တွေမြို့ကိုလည်ပတ်ကြည့်ရှုရာမှာ ငှားလာတဲ့ ကားသမားလေးဟာ ရခိုင်သံဝဲဝဲနဲ့ တစ်မြို့လုံးကို လိုက်လည်းပို့၊ ရှင်းလည်း ရှင်းပြပါတယ်။ သူလိုက်ပြတဲ့ နေရာတွေထဲက ထူးထူးဆန်းဆန်း တစ်နေရာကို ပြချင်ပါသေးတယ်။
အဲဒါကတော့ ပုံထဲမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပါဘဲ။ သစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်လုံးပေါ်မှာရှိနေတဲ့ လင်းဆွဲတွေပါ။ အရွက်တောင် မရှိတော့အောင် တစ်ပင်လုံးမှာ တွဲလောင်းချိတ်ပြီးနေ့ခင်းကြောင်တောင်မှာ ရှိနေတဲ့ လင်းဆွဲတွေကို သူလိုက်ပြတော့ ရီလဲရီချင်၊ သဘောလဲကျပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့တာပါ။
ကုလားတန်မြစ်လို့ ခေါ်တဲ့ ကစ္ဆပနဒီမြစ်ကမ်းဘက်ကနေ ပွိုင့်ကို ကားနဲ့ထွက်လာရာမှာ လမ်းတွေကို ကွန်ကရစ် ခင်းပြီး ပြုပြင်နေတာမို့ မကြာခင်မှာ မြစ်ကမ်းတစ်လျှောက် ခုထက်ပိုပြီး သာယာ လှပနေတော့မှာ သေချာသလောက် ရှိပါတယ်။ ကစ္ဆပနဒီမြစ်ကမ်းဘေးအတိုင်း ပတ်လာရင်း မြစ်ကြီးကို ကြည့်ပြီး ကစ္ဆပနဒီရယ်လို့ လှပခမ်းနားတဲ့ နာမည်ရှိခဲ့ပေမဲ့ ဘာကြောင့်များ ကုလားတန်မြစ် ရယ်လို့ ခေါ်ကြတယ်ဆိုတာ နားမလည်နိုင် ဖြစ်မိပါတယ်။ ကျွန်မအနေနဲ့ကတော့ ကစ္ဆပနဒီဆိုတဲ့ နာမည်လေးကို ပိုသဘောကျနှစ်သက်မိပါတယ်။
ဒီပုံတွေကတော့ ကစ္ဆပနဒီ မြစ်ကမ်းဘေးတစ်လျှောက် ရှုခင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ပင်လယ်နဲ့မြစ်တစ်စင်းတို့လှလှပပ ပေါင်းဆုံရာနေရာဖြစ်တဲ့ ပွိုင့်ကိုရောက်ပါပြီ။
ပွိုင့်မှာရှိတဲ့ မျှော်စဉ်ပါ။ မျှော်စဉ်ပေါ်တက်ပြီးလည်း ရှုခင်းတွေကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ပွိုင့်မှာ စားသောက်ဆိုင်လည်း ရှိတဲ့အတွက် စားရင်းသောက်ရင်းလည်း ရှုခင်းများကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသေးတယ်။
ပွိုင့်မှာ အမှတ်တရထားရှိတဲ့ ရှေးဟောင်းထန်းလုံးအမြောက်ပါ။ ပင်လယ်ပြင်ကို ချိန်ရွယ်ထားဟန် ထားရှိနေပုံကိုကြည့်ပြီး ဒီအမြောက်ဟာ ပင်လယ်ဘက်က လာသမျှ အန္တရာယ်ကို တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ပစ်မဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်ရတယ်လို့ ကျွန်မစိတ်ထဲ တွေးလိုက်မိပါသေးတယ်။
ဒီနေရာကတော့ ပင်လယ်နဲ့ မြစ်တစ်စင်းတို့ရဲ့ အလယ်ဆုံမှတ်ဘဲဖြစ်မယ်ထင်ပါရဲ့
ဒီပုံတွေကတော့ကမ်းစပ်က ကျောက်ဆောင်တွေပေါ် ဆင်းပြီးရိုက်ထားတာပါ။ ပွိုင့်မှာ ရှိနေတဲ့ ကျောက်ဆောင်တွေဟာ မြင်ရတဲ့အတိုင်း အလွှာအထပ်ထပ်တွေနဲ့မို့ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပြီး ကြည့်လို့လည်း အလွန်လှပါတယ်။ ပင်လယ်ရဲ့ ရိုက်ခတ်မှုကြောင့် ခုလို အလွှာအထပ်တွေ ဖြစ်နေတာလား။ ဘာကြောင့်ခုလို ဖြစ်နေတာလဲဆိုတာတော့ မသိနိုင်ပါဘူး။
ဟိုးခပ်လှမ်းလှမ်းမှာတော့ ကျွန်းကလေးတစ်ကျွန်းကို မှုန်ပြပြမြင်နေရပြီး အဲဒီကျွန်းပေါ်မှာတော့ အင်္ဂလိပ်ခေတ်က ဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ မီးပြတိုက်အဟောင်း ရှိနေပါတယ်။
ဒါကတော့ ယခုမှ ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ မီးပြတိုက်အသစ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မျှော်စင်ပေါ်ကနေ မြင်ရတဲ့ ရှုခင်းပါ။ ညနေစောင်းလာပြီမို့ နေလုံးကြီးက ပင်လယ်ထဲကို ငုတ်လျှိုးစ ပြုလာပြီမို့ နေဝင်ချိန်ကို ထိုင်ကြည့်ဖို့ စားပွဲတွေဆီကို သွားကြပြီး အုန်းရေလေးသောက်ရင်းနဲ့ ပင်လယ်ရဲ့ ဆည်းဆာချိန်ကို စောင့်ကြည့်ရတာ တကယ်ကို အရသာရှိလှပါတယ်။
စစ်တွေပွိုင့်ကနေလှမ်းမြင်ရတဲ့ ပင်လယ်ရဲ့ ဆည်းဆာအလှ
ငါးဖမ်းလှေတွေ ပင်လယ်ထဲ ထွက်ကြပြီလား.. ငါးဖမ်းပြီး ပြန်လာကြလေသလား.. မသိပေမဲ့ ဆည်းဆာရဲ့အောက်မှာ ငါးဖမ်းလှေတွေကလည်း ခန့်ညားလှပလို့နေခဲ့တယ်။
နောက်ဆုံးမှာ နေလုံးကြီးပင်လယ်ထဲ ငုတ်လျှိုးသွားတာနဲ့ စစ်တွေပွိုင့်ကနေ ပြန်လာပါတော့တယ်။ လှပလွန်းတဲ့ စစ်တွေပွိုင့်ရဲ့ အလှကိုကြည့်ဖို့ နောက်တစ်ကြိမ် အခွင့်သာရင် ထပ်လာပါဦးမယ်လို့လည်း စိတ်ထဲကနေ တိတ်တိတ်လေး ဆန္ဒပြုခဲ့ပါသေးတယ်။
ကျွန်မတို့တည်းတဲ့ စစ်တွေ ဟိုတယ်ကလည်း ကမ်းခြေမှာဘဲ ရှိတဲ့အတွက် ဟိုတယ်ရောက်တာနဲ့ အဝတ်အစားလဲပြီး ကမ်းခြေကိုအပြေးအလွှားဆင်းကာ ဓာတ်ပုံရိုက်ပါတော့တယ်။ ခုပုံတွေကတော့ စစ်တွေ ကမ်းခြေ (ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရဲ့ နေဝင်သွားပြီးတဲ့နောက်) ရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေပါ။
ဒီပုံလေးကိုတော့ ပင်လယ်ရဲ့ ကဗျာလို့ ကျွန်မ တင်စားပြီး ရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံလေးပါ။ ပင်လယ်ကြီးကတော့ နေဝင်သွားပြီးတာတောင် အလှကြီးလှနေတုန်းဘဲဆိုတာ ပုံလေးတွေကြည့်ပြီး လက်ခံနိုင်မယ် ထင်ပါတယ်နော်။ :P
ကမ်းစပ်ကနေ ပြန်တက်လာတော့ တော်တော်လေး မိုးချုပ်နေပါပြီ။ ဟိုတယ် ဝင်ပေါက်နားမှာ လူငယ်လေးတစ်ယောက် ရပ်စောင့်နေတာကိုတွေ့ရပြီး သူတို့က ကမ်းခြေကို ဆင်းသွားတဲ့ ဟိုတယ်ဧည့်သည်တွေရဲ့ လုံခြုံရေးကို စောင့်ကြည့်ပေးနေတဲ့ ဟိုတယ် ဝန်ထမ်းလေး ဖြစ်တာကို တွေ့လိုက်ရတော့ ဟိုတယ်ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကို စိတ်ထဲက အသိအမှတ် ပြုလိုက်မိ ပါတယ်။
နောက်တစ်နေ့ မနက်မှာတော့ အစောကြီးထပြီး မြောက်ဦးမြို့ကို ကားနဲ့ခရီးဆက်ခဲ့ပါတော့တယ်။ မကြာခင်မှာတော့ မြောက်ဦးမြို့ရဲ့ ရှေးဟောင်းစေတီပုထိုးများအကြောင်း ရေးပါတော့မယ်ရှင်။ ဆက်လက် အားပေးကြပါဦးလို့လည်း ပြောချင်ပါတယ်နော်။
ချစ်သော မိတ်ဆွေများအားလုံး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်။